NHAZI NETWORK NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Ọtụtụ ndị na-egwu mmiri na-eche banyere ajụjụ dịgasị iche iche banyere njehie dị iche iche na-ebili mgbe ha na onye na-egwu mmiri na-arụkọ ọrụ. Ọtụtụ mgbe, ha doro anya na edozi ha ngwa ngwa, ma ụfọdụ chọrọ mgbalị, oge na akwara. Ọ na-esiri m ike ịnyagharị ọhụrụ nke nwere ike ma na-agbalị ịchọta nkọwa ndị ọzọ banyere nsogbu ahụ bilitere, ma enweghị ike ịchọta ihe ọbụla ma ọlị. Ya mere o nwere ike ime na njehie "Mmiri na-ezighị ezi".
Ebumnuche nke ozi "iyi bụ koodu ezighị ezi" nwere ike zoo na njedebe nke onye ahịa ya ma ọ bụ na obere faịlụ faịlụ ahụ. Enwere otutu uzo eji edozi nsogbu a ma ha di mfe.
Ebumnuche nke 1: faịlụ egwu
Ikekwe agbajiri faịlụ torrent ma ọ bụ kwụnyeghị ya. Idozi njehie na faịlụ n'onwe ya bụ ihe siri ike, ọ dị mfe ịjụ onye nkesa maka iyi mmiri ma ọ bụ ịchọ ebe ọzọ. Ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ ederede na-ezighị ezi, mgbe ahụ ịkwesịrị ime usoro ndị a:
Gaa na ihe nchọgharị nke ibudatara iyi (ihe atụ a ga-egosi na ihe atụ Opera).
Gaa na akụkọ ihe mere eme n'okporo ụzọ "Akụkọ ihe mere eme" - "Akụkọ Nchọgharị doro anya".
Na windo na-esote, lelee igbe ahụ "Echere Foto na faịlụ".
Hichapụ faịlụ iyi site na nbudata nbudata na ibudata ya ọzọ.
Ọ bụrụ na ihe kpatara ya bụ na faịlụ ahụ n'onwe ya, mgbe ahụ ịkwesịrị iwepu ya n'aka onye ahịa. Dịka ọmụmaatụ, na uTorrent eme ya dika nka:
Kpọọ bọtịnụ nkwụsị aka nri na faịlụ nsogbu ahụ.
Gbanye ihe "Hichapụ ihichapụ" ma họrọ "faịlụ naanị".
Kwekọrịta na iwu ahụ.
Chọta ma bulite faịlụ faịlụ a na-akụghị.
Ebumnuche 2: Nsogbu na onye na-ekiri mmiri
Ihe kpatara njehie nwere ike ịbụ na onye ahịa. N'okwu a, ọ bara uru itinye usoro mmemme ọzọ. Ọ bụrụ na nke a adịghị enyere maọbụ na ị nweghị ikike, ọchịchọ ị gbanwee onye ahịa ahụ, ị ​​nwere ike iji magnet-njikọ. Ọ na-adịkarị, ọ dị na ndị nlekota niile. Ka akara akara magnet nwere akara. Ya mere, ịkwesighi ibudata iyi ahụ ma ị ga-enwetacha ihe niile.
Lee kwa: Usoro mmemme maka ibudata iyi
Detuo njikọ ahụ ma ọ bụ pịa akara magnet (ma ọ bụ njikọ na aha kwesịrị ekwesị).
A ga-akpali gị ịhọrọ usoro ịchọrọ ịmepe faịlụ ahụ, pịa "Mepee njikọ". Ọ bụrụ na ị nwere naanị otu onye ahịa, mgbe ahụ, o yikarịrị, ọ ga-akpaghasị njikọ ahụ.
Ọzọkwa, onye ahịa ahụ ga-enye gị ịhazi faịlụ nbudata, aha nchekwa, na ihe ndị yiri ya. N'ozuzu, ihe niile dị ka iyi mmiri.
Ị nwere ike ịgbalị ịmalitegharịa onye ahịa ahụ. Ngwa nwere ike ọ gaghị adịru nwa oge. Were ụzọ "Njikwa" - "Ọpụpụ" ma laghachi. Ugbu a maliteghachi ibudata iyi ahụ.
Ugbu a, ị maara ọtụtụ ụzọ ị ga-esi dozie njehie ahụ. "Mmiri na-ezighị ezi ederede" ma ị nwere ike ịnọgide na-ebudata ihe nkiri vidio dị iche iche, egwu, egwuregwu.